एपेन्डिसाइटिस के हो ? – Milappost
एपेन्डिसाइटिस के हो ?
मिलाप पोस्टबुधबार, २१ असोज, २०७७
यो समस्याको सुरुवाती चरणमा पेटको बीच भागमा पटकपटक दुखाइ हुने गर्छ । केही घण्टामा नै पेटको दाहिने तल्लो भागतर्फ दुख्न थाल्छ । जहाँ एपेन्डिक्सको समस्या हुन्छ । त्यतिबेला पेटको दुखाइ गम्भीर बन्दै जान्छ । यस्तो दुखाइ हिँड्दा वा खोक्दा झनै बढी हुने गर्छ ।एपेन्डिसाइटिसको बेलामा भोक कम लाग्ने, रातो आँखा हुने जस्ता समस्या देख्न सकिन्छ । एपेन्डिसाइटिस दुई प्रकारको हुन्छ ।